Be the Manager 2019 - ဘောလုံးနည်းဗျူဟာ APK ကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » မန်နေဂျာ 2019 Be - ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမဟာဗျူဟာ
မန်နေဂျာ 2019 Be - ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမဟာဗျူဟာ APK ကို
အဆိုပါ Manager ကို•••ရာသီ 2018 / 2019 Be ••••••
2012 ကတည်းက Android ပေါ်မှာကစားများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း downloads, သန်းပေါင်းများစွာနှင့်တကွ, သတ္တမ edition အတွက်ယခုမန်နေဂျာ Be!
တစ်ဦးဘောလုံးကလပ်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း, ချန်ပီယံအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူအားပြိုင်ဘက်ကိုအနိုင်ယူ။ ဒီဂိမ်းထဲမှာသင်ကထိရောက်စွာတစ်ဦးဘောလုံးကလပ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၏ထိပ်လိုင်းများမှယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အိပ်မက်၏အသင်းစုရုံးဘောလုံးကစားသမားကိုဝယ်ယူရန်နှင့်ရောင်း။ အလားအလာကစားသမားလေ့ကျင့်နှင့်သူတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများမြှင့်။ တစ်ခုချင်းစီကိုပွဲစဉ်များအတွက်မဟာဗျူဟာဖွံ့ဖြိုး။ စပွန်ဆာတွေနဲ့ကန်ထရိုက်လုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့အားကစားကွင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရန်။ ဂိမ်းစာရင်းဇယားလေ့လာပါ။ Be မန်နေဂျာ 2019 တစ်ဦးဖြစ်မည်ဘောလုံးမန်နေဂျာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းပြီးပျော်စရာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်းစွဲငြိဖွယ်ရာများနှင့်စိန်ခေါ်မှု။
2019 GAME အင်္ဂါရပ်များ:
အစစ်အမှန်အဖွဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ကစားသမားတွေနဲ့• 2018 / 2019 ဒေတာဘေ့စ
•အားကစားကွင်းအဆောက်အဦများကိုစီမံကွပ်ကဲ။ သင့်ရဲ့အားကစားကွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံ Upgrade သို့မဟုတ်ဘာစီလိုနာရဲ့စခန်း Nou အဖြစ်ကြောင့်ကြီးတွေလုပ်
•သင့်ကလပ် status ကို fit သောစပွန်ဆာပေးခြင်းနှင့်တီဗီအခွင့်အရေးများစာချုပ်များကိုရွေးချယ်ပါ
• Buy နဲ့ရောင်းကစားသမား။ ပိုကောင်းတန်ဖိုးကိုညှိနှိုင်းရန်။ တကျိပ်တပါးသော စတင်. သင့်ရဲ့အိပ်မက်ဘောလုံး Build
•သင့်ပွဲမဟာဗျူဟာကိုရွေးချယ်ပါ။ ခုခံကာကွယ်သို့မဟုတ်ထိုးစစ်? အောင်မြင်မှုရဲ့လမ်းအပေါင်းတို့!
• GAME ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဒါဟာတကယ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့ရှိသမျှသည် In-ဂိမ်းအတွေ့အကြုံရှိသည်ဆိုပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့မလိုအပ်ပါဘူး
သို့သော် ... အမှားတစ်ခုသတိထားဖို့နှင့်သင်ပစ်ခတ်နိုင်ပါသည်! ဒီကသင်သည်သင်၏ဆန့်ကျင်သင်း၏ရှေ့တော်၌ဆုံးရှုံးမအခြေခံဖြစ်ပါသည်ဖြစ်ပျက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ နီးကပ်စွာသူတို့ကိုလိုက်နာပါ။ အဆိုပါပွဲစဉ်သည်ရပ်တည်မှု, ထိပ်ဂိုးသွင်းနှင့်, သင်တန်း, သင့်ရဲ့တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်, မန်နေဂျာ၏ရလဒ်များကို Watch ။
ယခုအမှတ်ပေးရည်မှန်းချက်များ Start! သင့်ရဲ့ဆုဖလားစုဆောင်း Go!
ထို့နောက်အဆင်သင့်မရ။ ကမလှယျကူပါလိမ့်မည် ..
သငျသညျမှ ... ထိပ်မန်နေဂျာဖြစ်စုစုပေါင်းထိန်းချုပ်မှုရှိသည်!
အဘယ်အရာကို BTM 2019 Edition ကိုအသစ်ဖွင့်:
format NOW ကပိုမိုတိုးတက်လာပြီး
သင်တန်း NOW ကကို upgrad
သင်ကသူဌေးပါပဲ။ သင်ဆုံးဖြတ်။ သငျသညျကိုမှန်ကန်ထိပ်တန်းဘောလုံးကလပ်အသင်းဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်ကောင်းတစ်ဦးမန်နေဂျာနေထင်ပါသလား? သက်သေပြပါ!
ယနေ့သင့်ရဲ့ဘောလုံး Manager ကယောဘကို Start!
အန်းဒရွိုက်9ဖုန်းများအဘို့ကြော်ငြာ display ကိုပြင်ဆင်ချက်
မန်နေဂျာ 2019 Be - ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမဟာဗျူဟာ
9.00 ကို MB
Cyberfoot ဘောလုံး Manager ကို
အဖွဲ့ချုပ် Dream ...